सबै समुदायलाई समेटेर काम गर्छु’
माधवी शर्मा वाग्लेः उपमेयर पदकी उम्मेदवार
(नेपाली कांग्रेस, सिद्धार्थनगर नगरपालिका)
यहाको राजनीतिक यात्राबारे केही बताइदिनुस् न ?
म बिशेश्वर प्रसाद कोइरालाको बिचार, सिद्धान्तबाट प्रभाबित भई राजनीतिमा लागेकी हुँ । २०३६ सालको जनमत संग्रह देखि नै म राजनीतिमा केही न केही रूपमा संलग्न छु । बिद्यार्थी कालबाट नै राजनीतिमा लोगेकोले एसएलसी परीक्षा दिएपश्चात् प्रमाणपत्र तह (आईए) को अध्ययनका क्रममा पनि राजनीतिलाई निरन्तरता दिदै आएँ । तत्कालिन समयमा पञ्चायती सरकारद्वारा राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि भूमिगत तरिकाले नेपाली कांग्रेसमा रही काम गर्दै आए । पछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि अझ बढी सकृय हँुदै आए । हाल नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर २ को तर्फबाट महाधिबेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य छु । नेपाली कांग्रेसको कृयाशिल सदस्य २०४८ मा लिएकी हुँ र महिला संघ रूपन्देहीको कोषाध्यक्ष भई काम गरिसकेकी छु ।
उपमेयरमा यहा“को उम्मेदवारी किन ?
विगतका स्थानीय निर्वाचनहरूमा माथिल्लो तथा वडा अध्यक्षमा समेत महिलाहरूको पहुँच पुग्न सकेको थिएन । अहिले कम्तिमा प्रमुख, उपप्रमुख मात्र नभई वडा सदस्यहरूमा पनि ४ मध्ये २ जना (एक दलित महिला) अनिबार्य गरेको छ । नगर बिकासमा महिलाहरूको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । सोही क्रममा नगर बिकासका हरेक पक्षमा सहभागिताका लागि मेरो उमेदवारी हो । साथै महिलाहरू पनि अबसर पाए नेतृत्वमा पुगेर केही गर्न सक्छन् भन्ने धारणा मेरो छ । अवसरबाट बञ्चित महिलाहरू समाजमा धेरै छन् । ति महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको माध्यमबाट सबल र सफल समाज निर्माण गर्ने ध्येय समेत रहेकाले उपप्रमुख पदमा उमेदवार भएकी हुँ ।
नगरको विकास गर्न कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
पहिला म नगरलाई महिला मैत्री बनाउने छु । महिला तथा बिपन्न समुदायको आयआर्जन बढाउन सिपमुलका कार्यक्रमहरू ल्याउने छु । हाम्रो पार्टीको सिद्धार्थनगर समितीले प्रस्तुत गरेको ५० बुँदे संकल्पका बुँदाहरूमा बिकसित र समुन्नत नगर हाम्रो परिकल्पना हो । सोही परिकल्पनालाई पुरा गर्न हामी अघि बढ्ने छौं । देशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो नगर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रबेशद्वारको रूपमा चर्चित रहेकाले अब सोही अनुसार बिकाश गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टी र मेरो धारणा हो । भौतिक पूर्बाधार निर्माण संगै, सर्ब सुलभ शिक्षा, स्वास्थय, सामाजिक सुरक्षा, बाताबरण, खेलकुद हाम्रो प्राथमिकता हो । नगरका प्रत्येक वडाहरूमा सडक, ढल नाला निकास, प्रत्येक वार्डमा खानेपानीको ओभरहेड टंकी स्थापना गरी प्रत्येक घर घरमा स्वच्छ पिउने पानीको सर्बसुलभ ब्यबस्था गर्ने, सौर्यउर्जाको बढी प्रयोग, सिद्धार्थनगरलाई हरीत शहर बनाउने अभियान, बिभिन्न धर्म समुदायका मठ मन्दिर, गुम्बा, सिद्धार्थनगर अहिले ट्रान्जिट सिटी जस्तै रहेकाले पर्यटकीय पूर्बाधारहरू निर्माणमा जोड, डण्डा नदीको ब्यबस्थापन गरी बोटिंग र क्रस बोर्डर टुरीजम प्रबद्र्धन गरी भारतीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने योजना छन् । त्यस्तै बजारका मुख्य स्थानहरू बैंकरोड, मैत्रीपथ नारायणस्थान, देबकोटाचोक, बुद्धचोक बेलहिया लगायतमा रात्री बजार (नाईट मार्केट) को अबधारणा सहित सञ्चालनमा ल्याई बजारलाई गुलजार बनाउने योजना छ । यसका साथै खेलकुदलाई प्रबद्र्धन गर्न क्रिकेटको उर्वर भूमिलाई बढावा दिने, फुटबल स्टेडियम निर्माण गर्ने, हालै मात्र घोषित राष्ट्रिय खेल भलिबलको प्रबद्र्धन गर्न प्रत्येक वार्डमा एक÷एक वटा भलिबल कोर्ट स्थापना गर्ने र हरेक बर्ष खेलकुदका बिभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्ने रहेका छन् ।
म लामो समय देखि निस्वार्थ भावनाले राजनीतिमा लागेकी हँु । मैले अहिलेसम्म राजनीति गर्दा लोभ लालच केही पनि राखिन । नेपाली काँग्रेस पार्टीका कार्यकर्ता मात्र नभई अन्य राजनैतिक दलका धेरै कार्यकर्ताहरू मसँग निकट हुनुहुन्छ । यसका साथै समाजमा रहेका सबै बर्ग, समुदायहरूले पनि मलाई हेर्ने दृष्टीकोण सकरात्मक रहेको बुझेकी छु । साथै समाजका बिभिन्न पक्ष, सामाजिक संस्थाहरूमा समेत मेरो आबद्धता रहेको छ । सबैको आग्रह पछी नै म उपप्रमुख पदका लागी उम्मेदवारी दिन हौसिएकी हँु । मेरो उमेदवारीले सबै नगरबासीहरू उत्साहित देखिनु भएको मैले घरदैलोका क्रममा पाएँ । मेरो जितको आधार भनेको नगरबासी र मतदाता हुन् । मेरो जित भनेको सबैको घरघरमा उपप्रमुख हुनु हो ।